ရှညောသား: February 2018
အညာအလွမ်းပြေ တမာရွက်ပြုတ် နဲ့ ခရမ်းချဉ်သီးငါးပိချက်
အဖေအမေနဲ့ညီအစ်ကိုတွေကိုသတိရမိတယ်။ ဒါပေမဲ့ ထမင်းလက်ဆုံမစားဖြစ်တာ နှစ်တွေတော်တော်ကြာခဲ့ပါပြီ။ အိမ်ကိုပြန်ရောက်တဲ့အချိန်မှာ အတောင့်တဆုံးပေမဲ့ တယောက်တနယ်စီမှာ
နေကြရတော့ ငယ်ငယ်တုန်းကလို မိသားစုစုံစုံညီညီနဲ့ လက်ရေတပြင်တည်းစားရတဲ့
စာရေးသူ ရှညောသား at Monday, February 12, 20180comments Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
စာရေးသူ ရှညောသား at Friday, February 09, 20180comments Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
စာရေးသူ ရှညောသား at Friday, February 02, 20180comments Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook